Zimbabwe Human Rights Commission Inoti Vana Vanodarika Mamiriyoni Maviri Havana Magwaro ekuZvarwa
Komisheni inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission yaburitsa tsvakurudzo yayakaita inonzi National Inquiry on Access to Documentation in Zimbabwe inoratidza kuti vanhu munyika vari kukundikana kuwana magwaro akakosha muhupenyu hwavo.
Vachitaura neStudio 7 mushure mekuparurwa kwetsvakurudzo iyi muHarare, sachigaro veZimbabwe Human Rights Commission, VaElasto Mugwadi vanoti tsvakurudzo yavo yakabudisa kuti vana vari zera rekuenda kuchikoro vanosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu havana magwaro ekuzvarwa kana Birth Certificate uye vanhu vakuru vanodarika miriyoni imwechete havanawo magwaro aya.
VaMugwadi avo vanoti komisheni yavo yakatenderera nzvimbo dzakawanda munyika vachiita tsvakurudzo iyi vanoti zvikonzero zvikuru zviri kutadzisa kuti vanhu vawane magwaro mana aya zvinosanganisira kuwanda kwezvinodiwa kumahofisi amabharani mukuru wehurumende pamwe nukusatevedzerwa kwebumbiro remitemo yenyika.
Gwaro iri rinoratidzawo kuti zvimwe zvikonzero zvakadomwa neveruzhinji zvinosanganisira huori kumahofisi amabharani vanhu vachinzi vabvise mari dzechioko muhomwe kuwana magwaro akadai semapasipoti, kutadza kubatwa zvakanaka kwevanhu vanenge vashanyira mahofisi aya kuti vanowana magwaro akasiyana siyana uyewo kusawanikwa kwemahofisi amabharani mukuru munzvimbo dzese dzenyika.
Zimbabwe Human Rights Commission yakapa kurudziro nezvinofanirwa kuitwa nemapazi ehurumende akasiyana –siyana kuti dambudziko iri rigadziriswe kusanganisira kubazi rezvedzidzo uko vakakurudzira kuti kunyangwe vana vasina magwaro ekuzvarwa vabvumidzwe kuenderera mberi nedzidzo .
Vachitaura paiparurwa gwaro iri svondo rapera, mutauriri weNational Assembly, Advocate Jacob Mudenda vakati zvinosuwisa kuti dambudziko rekusawanikwa kwemagwaro aya munyika rakakura zvakanyanya vakati izvi zvinotyora kodzero dzevana veZimbabwe.
VaMudenda vakatiwo vekumahofisi amabharani mukuru vanofanirwa kuvanechido chekubatsira veruzhinji kuti vanhu vasatambure mukuwana magwaro.
Mumwe mugari wemuHarare VaOwen Dhliwayo vanoshanda nesangano rePlatform for Youth Development vatsinhirawo vakati kuwanikwa kwemagwaro aya idambudziko guru.
Hatina kukwanisa kutaura nevakasanobata chigaro chamabharani mukuru VaHenry Machiri.
Asi gurukota rezvemukati menyika VaKazembe Kazembe vati vanga vasingakwanisi kutaura nesu parunhare vakati tinyore mibvunzo yedu iyo yange isati yapindurwa pataenda pamhepo.